QURXINTA WAJIGA: Ukun Iyo Saliid Qumbe - Daryeel Magazine
QURXINTA WAJIGA: Ukun Iyo Saliid Qumbe
Qurxinta wajiga waa waxa ugu horeeya oo ay ka fakaraan Dumarka Dunida Ku nool, Gabarkastaa Maalinta ay qaan gaarto Muraayadey hor istaagto waxay barataa wax cusub oo nolosha ah iyo sidii ay wajigeeda u qurxin lahayn.
Gabdhaha qaar ayaa naftoodii halis galiyey sidey u heli lahaayeen waji qurxoon, Inkastoo ay is cadibeen hadana kuma aysan guuleysan in raggu u riyaaqaan ka dib dhibaatooyin la soo gudbanaaday. Qaarbaa xanuunsaday oo wajigiiba ka xumaaday.
In wajiga la qurxiyaa danbi ma ahan, Laakiin in quruxda laga raadiyaa ALLE caradii waa tan aduunka kuu soo jiida fool xumo aakhrina cadaab, Wax la isku qurxinayaa waa rag, Anniga oo qormadaan qoray ayaana idiin xaqiijinaya Dabaca raga ee Wjiga qurxoon, waa midka aan kiimikada la taabsiin.
Ogow oo maanka ku hay Gabar walbaa wey is qurxisaa iyadoo hadafkeedu yahay in ay hesho wiil ay qancisay oo nafteeda ka raali noqday, Rasuulku (SCW) wuxuu yiri “ ALLe wuu qurux badan yahay, Quruxdana wuu jecel yahay” xadaaskan ayaa inoo faa’ideynaya in la is qurxiyaa in ay banana tahay.
Laakin waxaan banaanayn In la is dhalan dooriyo, Suniyaha la qoro, Cidiyo dhaadheer la samaysto dhamaan intaas wax raga soo jeedi kara ma ahan kaliya Ragga waxa ka adkaan kara waxa weeye Waji dhalaalaya oo qalbiga magnad ahaan u jiidanya.
Hadaba Gabar soomaaliyeed oo Xafso la yiraahdo ayaa Barnaamij ay ugu tala gashay in gabdha Soomaaliyeed ay ugu faa’iideyso ku baahisay koonto ay “ Youtube” ka samaysatay, Xafsa oo ah qof isku hawshay in aan gabdhaha Soomaaliyeed laga badin. Ayaa markaan wax idin ka bari doonta sirta ka danbaysa in uu Wajigaago ahaado mid dhalaalaya.
Sidee Ukun wajoga loogu qurxiyaa.
Xafso ayaa markaan ku baraysa sida ukun wajiga loogu qurxiyo, Xafso waxay samayn doontaa labo habo oo Ukunta laa isticmali doono. Ukunta markey jabiso waxay uka qaadi doontaa “Xabka Ukunta” qaybta biyaha ah ” Qaybta dhexe” oo ah inta jaalaha ah oo biyaha ku dhaxjirta.
1. Qaybta xabka ayaa la hor isticmaalayaa waxaana loo baahan yahay in aad diyaarsatid, Badiibad, ama wax godon oo aad ku shubatid xabka ukunta, Burursh yar oo nooca wajiga lamariyo ah iyo Fayn ” Soofti” intaas ka dib waxaad bilaabaysaa in xab xabka qastid adoo isticmaalya afargeeto ama wixii kale ee aad ku qasi kartid.
Marka uu isku qasmo, waxaad daraysaa Burushka adoo dhamaan wajiga marinaya, Hal marmaarkaad wajiga oo dhan marisid biyaha xab xabka ee Ukunta, Ka dib waxaad bilaabi doontaa in aad Faynka” Sooftiga” wajiga saartid inta uu wajigu qoyan yahay. Ka dib dusha ayaad xab xabkii ka sii marineysaa.
Markuu isla qoyo, dhamaan wajigaaga oo dhan ayaa Faynka” Sooftiga” ku qarineysaa, markay isku qalalaan ayaa si yar oo fudud isga diireysaa. Ogow wajigaaga haduu xaad lee yahay markaas xabadi ku xarimeyso, waxaadna noqoneysaa liisho.
2. Markan intii dhexe ee ukunta ee jaalaha ah, ayaad wajiga marsanaysaa sida Qasilka loo marsado, ka dib cabaar ayaad kudeysaneysaa wajiga si uu kuugu nafaqoobo. Markaas meesha aad wajiga ku dhaqatid ayaad tageysaa waxaad na iska dhaqaysaa.
Xafsa ayaa damaanad qaadaysa in wajigo markaas qurux kuu noqon doono oo qurux kaliya ma ahaan sida wajigeeda uu u muuqdo kuu noqon doono. Xafso ayaana Muuqaalkan duubtay ka dib markii gabdho badan ay ka codsadeen sirta ka danbeysa quruxda wajigeeda. WQ Cabdullaahi Akhyaar, KP
Bunka Iyo Qurxinta Wajiga Dumarka Daldaloolada Wajiga (Open Pores) Ma Rabtaa Wax Dabiici Ah Oo Wajiga Kuu Nuuriya? MARAQ MACAAN: Moosbakeni Iyo Caano Qumbe